Bournemouth oo bayaan ka soo saartay xiddigeeda Ryan Fraser, kaasoo la la xiriirinayey kooxaha Arsenal iyo Liverpool – Gool FM
Bournemouth oo bayaan ka soo saartay xiddigeeda Ryan Fraser, kaasoo la la xiriirinayey kooxaha Arsenal iyo Liverpool
(Bournemouth) 15 Juunyo 2019. Kooxda kubadda cagta Bournemouth ayaa bayaan ka soo saartay xaaladda xiddigeeda Ryan Fraser, kaasoo la la xiriirinayo kooxaha Arsenal iyo Liverpool.
Madaxa fulinta kooxda Bournemouth ee Neill Blake ayaa soo jeediyey in Cherries ay miiska u saartay heshiis cusub ciyaaryahankeeda Ryan Fraser.
Laacibkan khadka dhexe ee reer Scottish ayaa hal sano kaliya uu kaga harsan yahay qandaraaskiisa kooxda Bournemouth, waxaana la la xiriirinayey kooxda Gunners iyo Reds kaddib bandhig ilqabad leh oo uu ka sameeyey horyaalka Premier League xilli ciyaareedkii dhammaaday ee 2018-19.
25-sano jirkaan ayaa loo diiwaan geliyey 14 caawin horyaalka Premier League xilli ciyaareedkii la soo dhaafay sidoo kalena waxa uu dhaliyey todoba gool oo kale, kaliya Eden Hazard oo 15 caawin ka sameeyey horyaalka Ingiriiska xilli ciyaareedkii hore ayaa ka caawin badnaa Fraser.
Ryan Fraser waxaa la la xiriirinayey inuu isaga tagi doono kooxda Bournemouth suuqa kala iibsiga xiddigaha ee xagaagan, laakiin madaxa fulinta naadiga ayaa ku rajo weyn inuu Fraser heshiis cusub u saxiixi doono naadiga Cherries lagu naanayso.
Neill Blake waxa uu sheegay in Ryan Fraser ay kala hadleen mustaqbalkiisa, maadaama uu heshiiskiisa kooxda ka harsan yahay 12 bilood oo kaliya, isagoo kalsooni weyn ka muujiyey inay sii haysan doonaan oo laacibku aqbali doono inuu qalinka ku duugo heshiiska cusub ee ay miiska u saareen.
Didier Drogba oo ku soo wajahan kooxda Chelsea haddii uu tago macallin Maurizio Sarri